Mahajanga : Foara Boeny Mionjo III sy Zova mifify | Région Boeny
Mahajanga : Foara Boeny Mionjo III sy Zova mifify
2 septembre 2016 A La Une, Actualité
Lanonana roa sosona no nitranga teto an-tampon-tanànan’i Mahajanga ny 31 Aogositra sy ny 01 septambra 2016 dia ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Foara ara-toekarena Boeny Mionjo andiany faha-telo sy ny fijerena miaraka ny Zova mifify na ny Fahatakonan’ny Masoandro.
Ny Fizahantany ho an’ny fampandrosoana maharitra
Io loha-hevitra nomena ny Foara ara-toekarena Boeny Mionjo andiany faha-telo izay haharitra efatra andro. Andaniny, ho fanatanterahana ny politikam-pirenena nofaritan’ny Filoha tany amin’ny fiandohan’ny taona fa ho taonan’ny Fizahantany ny taona 2016, ary ankilany amin’ny maha tanànan’ny fizahantany an’I Mahajanga sy ny faritra Boeny manontolo.
Satria tokoa dia saika manana toerana manintona mpizahantany avokoa ireo distrika mandrafitra ny faritra, indrindra amin’ny fizahantany maitso na ekolojika. Ary manomboka mampiroborobo ny fizahantany ambanivohitra ihany koa ny isa-kaominina amin’ny alàlan’ny fampidirana io sehatra io ao anatin’ny DIFT (Drafitra Ifotony Fanajariana ny Tany) na SAC (Schéma d’aménagement communal).
Vovonana iray natao hampisehoana taratra ny harena sy ny zava-misy eto Boeny ary natao ho fampihaonana sy fifanakalozan’ny vondron’ny mpamokatra sy ny vondron’ny mpanangom-bokatra sy ny mpanjifa no antom-pisian’ny Foara hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar tamin’ny kabary. Ka tanjona ny hoe tsy mandalo fotsiny ny fihaonambe toy izao fa mba misy soritsori-piaraha-miasa na tonga dia fifanekem-piaraha-miasa avy hatrany eo amin’ny tantsaha sy ny mpandraharaha nandray anjara, na nitsidika.
Raha zato ny mpandray anjara tany amin’ny andiany voalohany, dia tafakatra dimampolo amby zato tamin’ny faharoa ary maherin’ny 200 izy tamin’ity andiany faha-telo ity. Vokatry ny fambolena, malaza amin’izany ny lojy sy voanjo, ny fiompina toy ny tantely sy ny tilapia ary carpe, ary ny jono toy ny akamba sy lamatra no tena nisongadina mandritra ny foara. Eo koa ny asa-tànana ataon’ireo vondron’ny tantsaha vehivavy ka anisan’izany lamba voatenona amin’ny landy be dia alaina amin’ny ala honko ao amin’ny Kaomina Boanamary, distrikan’I Mahajanga II.
Anisany fanavaozana entin’ny foara andiany faha-telo ny fifaninana Vokatra mendrika eo amin’ireo sehatra efatra ireo. Misy mpitsara manokana manao fitsirihana ary hisy ny fanomezana mari-pakasitrahana sy amboara ho an’ireo mpamokatra nandresy amin’ny famaranana ny sabotsy 03 septambra 2016.
Mpitsidika iray alina no novinavinain’ny Komity mpanomana ny foara tany am-piandohana, mihoatra lavitra noho izany ny mety ho avy raha ny zava-misy satria fararanom-piahaonan’ny mpiala-sasatra sy mpizahantany I Mahajanga efa ho efatra herinandro izao ary maika nampitombo marobe azy ireo ny fisian’ny eklipsa.
Solombavambahoaka sy Loholona voafidy teto amin’ny faritra ary ny Minisitra Lefitra eo anivon’ny Minisiteran’ny Raharahambahiny misahana ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana no tonga nisolotena ny Fitondrana foibe izay nasain’ny Faritra hanome voninahitra ny fanokafana ny foara.
Ny Zova mifify sy ny Fizahantany, ivon’ny Foara
Satria fizahantany no loha-hevitry ny foara andiany faha-telo dia nomen-danja manokana ho fantatr’olona tamin’ity foara ity ny atao hoe Axe Marambitsy, izay toeram-pizahantany maitso sy ambanivohitra amin’iny ilany am-pitandranomasin’I Mahajanga iny, tanin’ireo Sakalava Marambitsy, izay ao amin’ny distrikan’I Mistinjo sy Soalala izany. Singanina ho mahasintona mpizahantany any ireo karazam-borona maro tsy fahita eran-tany toy ny Asity, ao koa ireo Faritra mando Arovana Vaovao ao Mahavavy izay ahitana ireo karazan-trondro tsy fahita toy ny damba, samy ao Mitsinjo avokoa. Ary ny Tsingy ao Namoroka sy ny sokatra Angonoky izay samy ao Soalala.
Natao ivon’ny foara miaraka amin’izay araka izany ny Zova mifify (masoandro miafina amin’ny fiteny sakalava) izay nojerena miaraka teny Katsepy, disitrikan’I Mitsinjo hisarihana ireo mpizahantany hamantatra iny ilany andrefan’I Boeny iny. Ka rehefa vita ny fijerena miaraka ny eklipsa na Zova mifify dia nisy avy hatrany fanaovana fizahantany fampahafantarana nomanin’ireo komitin’ny Eklipsa teny an-toerana izay notarihin’ny Préfet an’I Mahajanga sy ny Ben’ny tanànan’I Katsepy.
Fa tsy latsa-danja amin’izay koa ny fijerena miaraka ny eklipsa teto Mahajanga, ka teo amin’ny Bord de la mer, misy ny foara no toerana ofisialy nijerena izany, notarihin’ny Lehiben’ny Faritra sy ny Ben’ny tanànan’I Mahajanga, Atoa Andriantomanga Mokhtar.
Nihidy an-trano ary tsy nisy sahy nandeha teny an-dalambe mihitsy ny ankabeazan’ireo atao hoe zana-tany teto Mahajanga. Fa nifanohitra amin’izay kosa, tomefy ireo mpanao vakansy kosa ny Bord nijery miaraka izany eklipsa izany sady nanararaotra nitsidika ireo tranohevan’ny foara.
Nilamina ary nahaliana sy nahafa-po ny rehetra ny toerana fijerena miaraka sy ny fivarotana solomaso voatokana izay nisy karazany teo amin’ny vidiny araka ny fihaviany (1400 ar avy amin’ny Fahasalamana, hatramin’ny 6000 ar avy amin’ny mpandraharaha vahiny). Nisy ihany koa nefa fizarana maimaim-poana ho an’ireo sahirana.